Nividy drone vaovao ho an'ny mpanjifa aho ... ary Mahagaga | Martech Zone
Nividy drone vaovao ho an'ny mpanjifa aho… ary Mahagaga
Alakamisy Janoary 9, 2020 Alakamisy Janoary 9, 2020 Douglas Karr
Taona vitsy lasa izay, nanoro hevitra ny mpifanaraka amin'ny tafontrano lehibe iray aho amin'ny fisian'izy ireo amin'ny Internet. Nanangana sy nanatsara ny tranonkalany izahay, nanangana fampielezan-kevitra mitete hisamborana ary hanomboka hamoaka ny tetikasan'izy ireo an-tserasera. Ny zavatra iray tsy hita anefa dia teo alohan'ny sy aorian'ny sarin'ireo fananana.
Tamin'ny alàlan'ny fidirana an-tserasera sy ny rafitra fitantanana ny tetik'asa dia afaka nahita ireo fananana nikatona aho ary rehefa vita ny tetikasa. Rehefa avy namaky hevitra iray taonina an-tserasera aho dia nividy a Drone DJI Mavic Pro.
Na dia naka sary mahafinaritra sy mora manidina aza ny drôna, dia ny fanaintainana tokoa ny nampiorina sy niasa. Tsy maintsy niditra tao amin'ny DJI aho ary nieritreritra fa fampiharana iPhone, mampifandray ny telefaona amin'ny mpanara-maso ary ratsy kokoa… miditra amin'ny sidina rehetra. Raha tany amin'ny faritra voafetra aho dia tsy maintsy nanoratra ny sidina ihany koa aho. Nampiasako ilay drôna nandritra ny roa ambin'ny folo tetikasa ary avy eo namidiko tamin'ny mpanjifa rehefa vita ny fifanarahana taminy. Drôna tsara io, mbola ampiasain'izy ireo mandraka ankehitriny. Tsy mora ny nampiasaina ary tsy nanana mpanjifa hafa aho izay nisy dikany.
Mandrosoa haingana isan-taona ary ny ivon-toerako Midwest Data Center dia nanokatra zava-baovao vaovao ivon-kevitra ao Fort Wayne, Indiana izay nahitana ampinga EMP. Fotoana izao mba hisamborako tifitra drone vitsivitsy, ka nahazo mpaka sary sy mpaka sary an-tsary vitsivitsy tao amin'ilay faritra aho.
Ny lafo nalaina azoko tamin'ilay asa dia lafo be… ny ambany indrindra dia 3,000 $ nalaina sary sy sary an'ireo toerana 3 an'ny orinasa. Raha jerena ny fotoana sy ny fiankinan-doha amin'ny toetr'andro, tsy astronomika izany… fa mbola tsy te handoa izany karazana fandaniana izany aho.
Robot Autel EVO
Nivoaka aho ary namaky hevitra bebe kokoa an-tserasera ary hitako fa nisy mpilalao vaovao teny an-tsena nihanaka be tamin'ny lazany, ny Robot Autel EVO. Miaraka amin'ny efijery anatiny ao amin'ny mpanara-maso ary tsy mila miditra, azoko atao fotsiny ny mamoaka ilay drone, manidina azy ary maka ireo horonan-tsary sy sary ilaiko. Izy io dia manana valindrihana izay avo ampy ka tsy misy fisoratana anarana FAA na fahazoan-dàlana ilaina hanidinana azy. Tsy misy fanamboarana, tsy misy tariby mampifandray… alefaso fotsiny dia alefaso. Mahafinaritra… ary tena lafo kokoa noho ny Mavic Pro.
Antsipirian'ny vokatra ho an'ny drone:
Fitaovana eo anoloana EVO dia manolotra fakan-tsary matanjaka amin'ny gimbal 3-axis stabilize izay mirakitra horonantsary amin'ny famolavolana 4k hatramin'ny 60 frame isan-tsegondra ary haingam-pandeha hatramin'ny 100mbps ao anaty codec H.264 na H.265.
Ny fampiasana optika tena-fitaratra EVO dia maka sary manaitra amin'ny megapiksela 12 miaraka amina faritra maro karazana ho an'ny antsipiriany sy ny lokony.
Ny rafitry ny fahitana solosaina mandroso dia manome fisorohana ny sakana eo aloha, ny fisavana ny sakana aoriana ary ny sensor ambany ho an'ny fipetrahana marimarina kokoa sy sidina anaty trano maharitra
Ny EVO dia mirehareha amin'ny fotoana sidina hatramin'ny 30 minitra miaraka amin'ny 4.3 kilometatra (7km). Ankoatr'izay, ny EVO dia manolotra fiasa tsy mahomby mampahafantatra anao rehefa ambany ny bateria ary tonga ny fotoana hodianao any an-trano.
Ny EVO dia misy mpanara-maso lavitra izay misy efijery OLED mirefy 3.3 santimetatra manome anao fampahalalana mahaliana momba ny sidina na fahana horonantsary horonantsary 720p HD mamela anao hahita ny fijerin'ny fakantsary tsy mila fitaovana finday.
Sintomy ny rindrambaiko Autel Explorer maimaimpoana ho an'ny fitaovana Apple iOS na Android ary ampifandraiso amin'ny mpanara-maso lavitra ary mahazoa fidirana amin'ny toe-javatra mandroso kokoa sy ny fisidinan'ny fiaramanidina mizaka tena toa ny Dynamic Track, Viewpoint, Orbit, VR voalohany ary ny drafitra misiona an'ny Waypoint.
Ny Evo dia manana slot Micro SD ho famindrana mora ny rakitra.
Nividy batterie fanampiny sy boaty malefaka iray hitondra ny drôna aho. Mivalona milamina ary mora entina.
Vidio ny Autel Robotics EVO Drone Bundle
Nanao varavarana misokatra tao amin'ny foibem-baovao izahay ary noraisiko ny drone, naka sary sy horonan-tsary vitsivitsy aho, ary nivoaka tsara tarehy. Teo ny mpanao gazety teo an-toerana ary afaka nandefa azy ireo ny horonantsary izay nampiasain'izy ireo tamin'ny tantarany avy eo. Herinandro vitsivitsy taty aoriana dia nisy seho vaovao iray hafa nanadinadina ireo tompony ary nampiditra ny horonantsary ihany koa. Ary nanatsara ny tranonkalany aho, anisan'izany ireo sary sy horonantsary ao anatiny. Ireto misy sary:
Drone Shots ny Data Center an'ny Data Lifeline
Io no $ 1,000 $ tsara indrindra nandaniako… efa nahazo fampodinana mahomby amin'ny fampiasam-bola ary mpanjifa tena faly tokoa. Ny tsara indrindra dia tsy nila akorany akory ny fiasana rehetra… vakio fotsiny ny torolalana dia maka sary tsara ianao ao anatin'ny minitra vitsy. Navoakako koa izy ary nosedraiko nanidina azy tsy lavitra ... ary niverina tao anatin'ny minitra vitsy. Fotoana hafa, nanidina azy io tamin'ny hazo iray aho ary afaka nanetsiketsika azy. Ary na izany aza, tamin'ny fotoana hafa, navoakako ho eny amin'ny sisin'ny trano… ary nahagaga fa tsy nisy simba na kely aza. (Whew!)
Fanamarihana: Nanambara ny kinova farany an'ny drone i Autel, ny Autel Robotics EVO II… saingy mbola tsy hitako izany tany Amazon.
Disclosure: Mampiasa ny kaody mpampifandray ahy aho ho an'ny DJI sy Amazon ao anatin'ity lahatsoratra ity.
Tags: alitararobotika autel EVOrobotika autel EVO 2điDJI Mavicdrônasary drone
Ahoana ny fomba ahafahana manafatra sy manatsara ny WordPress amin'ny sary asongadina